Eche echiche banyere ere ma ọ bụ inye onyinye gị iPhone na-eme ka ụzọ maka onye ọhụrụ? Chegodị echiche ọzọ. Anyị ngwaọrụ nwere bara uru data, ma anyị na-aghọta ma ọ bụ. Ọbụna mgbe ị na ehichapụ ndị a dị mkpa onye ọmụma, e nwere ka-ekwe omume na-agbake ha n'ihi na obi ojiji.
Part 1. Olee na-ehichapụ ihe iPhone na 1 click
Part 2. Olee na-ehichapụ a kpọchiri iPhone
Part 3. Olee na-ehichapụ gị iPhone na Ezuru
Olee otú Jiri Wondershare SafeEraser ka Hichapụ An iPhone Data
Zere na-aga site dịrị usoro iweghachi gị iPhone ya ụlọ ọrụ ntọala. Nzọụkwụ ndị a ga-enyere gị ihichapu ngwaọrụ gị kpamkpam na hụ na ọ dịghị onye data na-anọgide na gị iPhone.
Nzọụkwụ 1a. Pịa "Ihichapu All Data" button na isi interface nke Wondershare SafeEraser software.
Nzọụkwụ 1b. Iji gosi na iwu, ụdị ke 'ihichapụ' na ederede igbe. Pịa "Ihichapu ugbu a."
Nzọụkwụ 2a. Jide n'aka na gị iPhone anọ na njikọ na kọmputa gị ofụri erasing
Nzọụkwụ 2b. Ị ga-enwe ike ịhụ na "Complete" ihuenyo ozugbo dum usoro zuru ezu.
Ùnu echefuola passcode maka gị ochie iPhone? Mkpa ka ị ehichapụkwa ozi ọ bụla ẹdude ke na iPhone tupu-enye ya onye ọzọ? Ebe a bụ otú ị nwere ike ihichapu ozi nkeonwe na iPhone si passcode:
Nzọụkwụ 1. Link elu iPhone na kọmputa na iTunes.
Nzọụkwụ 2. Force Malitegharịa ekwentị ahụ na iPhone (pịa ma jide "Ụra / Tetanụ" na "Home" buttons ọnụ) mgbe ọ na jikọọ na kọmputa. Ime nke a ogologo oge iji ime iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ (gosiri site Apple logo).
Nzọụkwụ 3. Ozugbo iPhone bụ na mgbake mode, e kwesịrị a iwu window gosiri na kọmputa gị. Pịa "Weghachi".
Nke a ga-ihichapụ iPhone si passcode na ọdịnaya. iTunes ga-ahụ ibudata ma wụnye sistemụ na iPhone.
Nzọụkwụ 4. Ozugbo a mere, iPhone ga-adị ka ohuru. Ọhụrụ nwe ga-enwe ike melite ngwaọrụ dị ka a ọhụrụ unit ga.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ọ na-ewe ihe karịrị 15 nkeji ibudata na wụnye software, na iPhone ga wepuÚ Iweghachite ọnọdụ. Ị ga-mkpa ikwugharị nzọụkwụ 2 na nke 3.
Ị dị nnọọ ghọtara na gị iPhone bụ agaghịkwa na gị. Gị rosh, na ị bụghị n'aka ọ bụrụ na ọ Ezuru ke ahụ ji ọrụ n'aka ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dara nke gị n'akpa uwe dị ka ị efehe enwetaghị ụgbọ okporo ígwè ahụ na ị bụ ugbu a on. Ị ahụ cheta na ị nwere ozi dị mkpa na-echekwara na gị iPhone.
Gịnị ka i kwesịrị ime? Ị maa adịghị chọrọ ịbụ a aja njirimara-ezu ohi.
E nwere di na nwunye nke nhọrọ maka gị:
1: "Chọta My iPhone" na-nyeere
The "Chọta My iPhone" mma bụ a nifty omume ka ị chọta ọ bụla nke gị iOS ngwaọrụ. Ozugbo ọ na-emi odude, ị pụrụ ndị dị mkpa iji chebe onwe gị n'aka ojiji mgbalị na gị data
Nzọụkwụ 1. Site a kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ, abanye n'ime icloud.com/find. Alternatively, i nwere ike iji "Chọta My iPhone" ngwa na ọzọ iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Mepee "Chọta My iPhone" taabụ ma họrọ gị iPhone aha. Ị kwesịrị ị na-enwe ike ịhụ ya na ọnọdụ na a map.
Ọ bụrụ na ọ dị nso, pịa na "Play Sound" button ịnọ na nche gị ya ugbu a ebe.
Nzọụkwụ 3. Kwado na "Echefuola mode" igbachi gị iPhone remotely na a anọ-ọbula Nchikota passcode. Ọ ga-ahụ na-egosipụta a omenala ozi na gị na-efu iPhone si mkpọchi ihuenyo - omenala ya a contactable ọnụ ọgụgụ nke mere na onye nwere ike kpọtụrụ gị.
Mgbe ke "Echefuola na ọnọdụ", ị ga-enwe ike soro ije nke ngwaọrụ gị na igbochi onye ọ bụla na-azụ gị Apple Ṅaa akaụntụ.
Nzọụkwụ 4. Kọọrọnụ gị zuru ọ bụ furu efu iPhone ka iwu mpaghara enforcers.
Nzọụkwụ 5. Ọ bụrụ na ọ na-anọgide na-efu karịrị otu oge nke oge na ị na-adịghị ala na (na nke a nwere ike dị ka ọma na-ka anya dị ka ị na-aghọta na ọ na-arahụ), ihichapu ị iPhone. Ozugbo ị pịa "ihichapu iPhone", ọ bụla data ga-ehichapụ ngwaọrụ. Ị gaghị enwe ike soro ya ọzọ. Ozugbo ị wepụ iPhone si gị iCloud akaụntụ mgbe erasing ya ọdịnaya, ebighị mkpọchi ga-nkwarụ. A mmadụ ọhụrụ ahụ ga-enwe ike iji ngwaọrụ.
Cheta na: usoro 3 na 5 naanị ike mere mgbe ekwentị bụ online. Ị ka pụrụ inwe ike iwu - ọ ga na-adị irè mgbe ekwentị na-aga online ọzọ. Adịghị ewepụ ngwaọrụ tupu ọ na-aga online n'ihi iwu ndị a ga-adabaghi ​​ọ bụrụ na ị na-eme otú ahụ.
Nhọrọ 2: "Chọta My iPhone" na-adịghị nyeere
Enweghị enyere "Chọta My iPhone" atụmatụ, ị ga-enwe ike ịchọta gị iPhone. Otú ọ dị, i nwere ike ka na-echebe onwe gị si data-ezu ohi.
Nzọụkwụ 1. Ịgbanwe paswọọdụ gị Apple ID - nke a ga-egbochi onye ọ bụla si esi n'ime gị iCloud nchekwa ma ọ bụ na-eji ndị ọzọ ọrụ na gị furu efu iPhone.
Nzọụkwụ 2. Ịgbanwe okwuntughe nke ndị ọzọ na ndekọ na gị iPhone eg-akparịta ụka n'Ịntanet, internet ichekwa ego na bank, email akaụntụ wdg
Nzọụkwụ 3. Akọ gị zuru ọ bụ furu efu iPhone ka iwu mpaghara enforcers.
Nzọụkwụ 4. Report gị zuru ọ bụ furu efu iPhone gị telco eweta - ha ga-gbanyụọ akaụntụ gị mere na ndị mmadụ ga-enwe ike iji gị SIM na-eme ka ekwentị oku, izipu ozi na-eji gị data.
> Resource> iPhone> Full Guide to Hichapụ ihe iPhone